China Yepamusoro Yemhando yepamusoro Tsika Yakachipa Simba Off Ndangariro Smart plugs Outlet Wifi vagadziri uye vanotengesa | SNOPE
Model Nhamba SNW-209
Rated Ikozvino 10A
Maoko-Mahara Ekudzora Izwi: Gosund Smart plug inoshanda neAki neGoogle Kumba Mubatsiri, dzora zvishandiso zvako zvekumba nekungovapa mirairo yezwi kwavari. Nakidzwa neruzivo rwemaoko-rwemaoko, zvinobatsira kuchengeta vanaamai, vana, vakuru uye nevanhu vese, gadzirira uye edza aya maAlegs smart plugs.
Chengetedza Zvishandiso Zvako kubva Kwese Kwese muNguva ipi neipi: Vhara zvishandiso zvekumba mune smart shopu, dhawunorodha iyo Gosund app, udzore ivo kubva chero kupi neako smartphone. Uye iwe unogona kugadzira boka rezvivakwa zvese zvewifi wovhura wovadzima nekamwe chete.
Timer uye Basa reShedhiyo: Gadzira yakatarwa nguva uye chirongwa chekumisikidza kana kudzima chero zvemagetsi zvemagetsi nemidziyo, sekubvisa charger kubva pafoni yako yakazara zvakazara, kuisa mwenje kuti uuye manheru kana kudzima pakubuda kwezuva zvichingodaro. Deredza kushandiswa kwesimba uye chengetedza mari.
Yakachengeteka uye Yakavimbika Smart Plug: Iyo smart plug inoburitsa inotora zvinhu zvekutanga uye matekiniki, senge V-0 murazvo unodzora giredhi thermoplastics, yakachena mhangura inosangana uye yepamusoro PCBA, iyo inogona kudzivirira njodzi dzemoto uye kupa zadzisa kuchengetedzwa kuchengetedza mhuri yako kuchengeteka.
Kuisa nyore uye nekukurumidza: Ingo plug smart smart kubhenji mumadziro, ibatanidze iyo neinternet kuburikidza neWi-Fi network (chete 2.4Ghz), hapana hub uye kunyoreswa kunodiwa. Uye zvakare zvisina waya chengetedza midziyo yemumba nefoni yako kana izwi. Iwe unogona zvakare kugovana kutonga pamwe nemhuri yako uye kunakirwa nekunakirwa kweye smart imba pamwe chete.
Pashure: Fekitori Yakananga Yakakwira Yakakwirira Remote Kudzora KweMobile App Smart plug Wifi 16Amp
Zvadaro: Yakakwira Yemhando yepamusoro Tsika Yakachipa neHurumende-Mhinduro Smart Plug Wifi US
Factory Mutengo Mugadziri Mutengesi Meter Simba ...
High Quality Wholesale Custom Cheap State-Feedb ...
High Quality Wholesale Custom Cheap Meter Simba ...
Fekitori Yakananga Kutengesa 2 USB Ac 100-250V Panel M ...